को बन्ला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
को बन्ला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष?
आकाश क्षेत्री काठमाडौं फागुन २८
राष्ट्रिय योजना आयोगका अघिल्ला उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आयोगका लागि नयाँ उपाध्यक्षको खोजीमा छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिको पद भएकाले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त हुने उपाध्यक्षले राजिनामा दिने र सरकारले नयाँ व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउने चलन छ।
योजना आयोग सरकारलाई समग्र अर्थतन्त्र, विकास निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजना लगायत विषयमा सुझाव दिने निकाय हो।
नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले राजीनामा दिए। कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका उपाध्यक्ष वाग्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको पदभारग्रहणको केही दिनमै राजीनामा बुझाएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि ५ जना आर्थिक विशेषज्ञले दौडधुप सुरु गरेका छन्। तिनमा त्यो सूचीमा पर्छन् अर्थविद्हरु डा पुष्प कँडेल डा गोविन्द नेपाल, डा गोविन्द्र बहादुर थापा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा र डा रमेश पौडेल रहेका छन्। यी मध्य कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय व्यवस्थापन संकायका प्रध्यापक हुन् र विगत १० वर्षदेखि एमालेको केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन्।
अर्थ व्यवस्था सम्वन्धी १० वटा भन्दा धेरै पुस्तकहरु लेखेका कँडेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदका अन्य सम्भावित नामहरु भन्दा धेरै सम्भावना भएका आकांक्षीमा पर्छन्। लामो समयदेखि अर्थ व्यवस्थाको विषयमा अध्ययन गरेकाले आफूले योजना आयोगको जिम्मेवारी पाए, राम्ररी काम गर्न सक्ने दावी समेत गर्छन् उनी।
यसअघि एक कार्यकाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भइसकेका डा दिनेशचन्द्र देवकोटा पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदका अर्का आकांक्षी हुन्। एमाले निकट उनी नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष समेत छन्।
यसअघि नै योजना आयोगको सदस्य भइसकेकाले आफूले राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने देवकोटा बताउँछन्। देवकोटा भन्छन्प, ‘पहिल्यै योजना आयोगको सदस्य भइसकेकाले पनि आयोको कामलार्इ कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान मसँग छ। मबाहेक अर्काे बिकल्प छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।’
अर्थशास्त्रको प्रध्यापकको रुपमा ३८ वर्ष अध्यापन गराएका गोविन्द नेपाल पनि यस पदका अर्का आकांक्षी हुन्। नेपालले अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्काकारको रुपमा पनि काम गरिसकेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको वरिष्ठ सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिसकेका उनी नेपालको १२औं परियोजनाका संयोजक समेत रहिसकेका छन्। नेपालसँग आर्थिक पाटोमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ।
योजना आयोगसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेकाले आफू योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा नयाँ .कामहरु गर्न चाहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मैले नेपाल सरकारका लागि आर्थिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरें। त्यसैले, म योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदको लागि योग्य छु जस्तो लाग्छ।’
४ पटक अर्थमन्त्रालयको वरिष्ठ सल्लाहकार रहेर काम गरेका डा गोविन्द बहादुर थापा पनि योगना आयोगको उपाध्यक्ष पदका अर्का आकांक्षी हुन्।
एसियाली विकास बैंकमा नेपालको तर्फबाट बोर्ड निर्देशक भएर केही वर्ष काम गरिसेका थापा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष समेत भइसकेका छन्।
‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ अभियान देखि बृद्धभत्ताको अवरधारणा ल्याउने मामिलामा समेत आफ्नो योगदान भएको दावी गर्ने थापा आफूले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने हो भने योजना आयोगले नयाँ पार्ने बताउँछन्।
त्यस्तै अष्ट्रेलियाबाट पिएएचडी गरेर आएका युवा अर्थविद् डा रमेश पौडेल पनि राष्ट्रिय योगना आयोगको उपाध्यक्ष पदका आकांक्षी हुन्। उनले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले भन्दा अघिल्लो व्याजमा पिएचडी गरेका थिए।
प्रकाशित २८ फागुन २०७४, सोमबार | 2018-03-12 10:10:44